PQQ အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ အစားအစာများတွင်သောက်သုံးခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ် Bulk PQQ အမှုန့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၊
မေလ 8, 2020
methoxatin ဟုလည်းလူသိများသော Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်အပင်များစွာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဗီတာမင်ကဲ့သို့သော cofactor ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ PQQ သည်သဘာဝမိခင်နို့နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏တစ်ရှူးများတွင်လည်းတွေ့ရသည်။
သို့သော်၎င်းကိုအစားအစာတွင်အနည်းငယ်သာတွေ့ရှိရသည် pqq အမှုန့်အမြောက်အများ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းလုံလောက်သောပမာဏရရှိရန်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်သည်
PQQ ကိုအစပိုင်းတွင်ဘက်တီးရီးယားများတွင် coenzyme အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်လူတို့၏ B-Vitamin နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Pyrroloquinoline quinone (pqq) သည်ဆယ်လူလာအချက်ပြလမ်းကြောင်းများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များနှင့် redox လှုပ်ရှားမှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများမှတစ်ဆင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပြသခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၏ pqq ယန္တရားများမှာ -
Pyrroloquinoline quinone သည်အမျိုးမျိုးသောမျိုးဗီဇများဖော်ပြခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် mitochondria လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်သောမျိုးဗီဇများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ယင်း၏ antioxidant လုပ်ဆောင်မှုသည်ဗီတာမင်စီ၏အဆ ၁၀၀ ထက်အဆ ၁၀၀ ပိုသည်ဟုဆိုပါသည်။
PQQ ဖြည့်စွက်ချက်သည် mitochondria ဇီဝဖြစ်စဉ်တွင်တိုက်ရိုက်ပါ ၀ င်သည့် CREB နှင့် PGC-1a အချက်ပြလမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Pyrroloquinoline quinone (pqq) anti-oxidative လုပ်ဆောင်မှုသည်အဓိကအားဖြင့် cysteine ​​ကဲ့သို့သောအေးဂျင့်များနှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းဖြင့် PQQH2 သို့လျှော့ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ glutathione သို့မဟုတ် nikotinamide adenine dinucleotide ဖော့စဖိတ် (NADPH) ။
Pyrroloquinoline quinone သည်အင်ဇိုင်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည် thioredoxin reductase 1 (TrxR1) သည်အလှည့်၌ antioxidant ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့် Nuclear factor erythroid 2-related factor2(Nrf2) လှုပ်ရှားမှုများကိုအစပျိုးစေသည်။
PQQ သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော quinoproteins (ပျက်စီးစေသောပရိုတိန်း) များဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဟန့်တားသည်။
အဓိကအရေးကြီးသော (PQQ) pyrroloquinoline quinone အကျိုးကျေးဇူးများ
များစွာသော pyrroloquinoline quinone အကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသည်။
i ။ PQQ သည် mitochondrial function ကိုအားပေးသည်
Mitochondria သည်ဆဲလ်များအသက်ရှုခြင်း (cellular respiration) မှတစ်ဆင့်ဆဲလ်များ၌စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသော organelles များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုမကြာခဏဆဲလ် (သို့) စွမ်းအင်စက်ရုံများအတွက်စွမ်းအားများဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
Mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများအကြားကြီးထွားမှုလျှော့ချခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါစသည့်ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Pyrroloquinoline quinone သည် mitochondria ဆဲလ်အသစ်များ (mitochondrial biogenesis) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် mitochondrial လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ဤသည် CAMP တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်စည်းနှောင်ပရိုတိန်း 1 (CREB) နှင့် Peroxisome proliferator-activated အဲဒီ receptor-gamma coactivator (PGC) -1alpha, mitochondrial ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းလမ်းကြောင်း၏ activation ခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Pyrroloquinoline quinone သည် mitochondria အတွင်းရှိ antioxidants အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောကူးယူခြင်းအချက်များကိုလည်းတိုးပွားစေသည်။
Pqq သည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့် mitochondria တွင်အင်ဇိုင်းများကိုအစပျိုးသည်။
ကြွက်မော်ဒယ်လ်များတွင်အစာစားခြင်း၌ PQQ ချို့တဲ့မှုသည် mitochondrial function ကိုပျက်စီးစေသည်ဟုသတင်းပို့သည်။
ii ။ ရောင်ရမ်းခြင်းသက်သာ
နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းသည်နှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါစသောရောဂါများစွာ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ Pyrroloquinoline quinone သည်ဓါတ်တိုးပစ္စည်းများနှင့်ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အခမဲ့အစွန်းရောက်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည့် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
အချို့သုတေသနများကပြသခဲ့သည် PQQ ဖြည့်စွက် သုံးရက်အတွင်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းခြင်းများစွာကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေသည်။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းခံစားရသည့်ကြွက်များအားလေ့လာမှုတွင် PQQ အုပ်ချုပ်မှုသည် ၄၅ ရက်အကြာတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးရန်အစီရင်ခံခဲ့သည်။
iii ။ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်
Pyrroloquinoline quinone သည်အာရုံကြောကြီးထွားမှုအကြောင်းအချက်များများစွာထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက် (neurogenesis) ကိုပြန်လည်ကြီးထွားနိုင်စွမ်းရှိသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ pqq ဖြည့်စွက်အာရုံကြောကြီးထွားမှု (NGF) ၏ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အာရုံခံဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
Pyrroloquinoline quinone သည် ဦး နှောက်၏ဆဲလ်များကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ကျန်းမာသော်လည်းသက်ကြီးရွယ်အိုများ ၄၁ ယောက်ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ၁၂ ပတ်ကြာတစ်ရက်လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်ထိုးပေးသော PQQ သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုထိရောက်စေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
Pyrroloquinoline quinone သည် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာကိုကာကွယ်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။
ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သော ဦး နှောက်ဒဏ်ရာမတိုင်မီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် pqq ကိုကြွက်များအား ၃ ရက်ကြာလေ့လာခဲ့သည်။
ဃ။ PQQ သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်
Pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်အိပ်ပျော်ရန်အချိန်ကုန်မှုကိုလျှော့ချရန်၊ အိပ်ချိန်ကြာချိန်ကိုတိုးစေပြီးအိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။
Pyrroloquinoline quinone သည်တစ် ဦး ချင်းအတွင်းရှိစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းပမာဏ (cortisol) ကိုလည်းလျော့နည်းစေပြီးသူတို့၏အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်သူ ၁၇ ယောက်၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၈ ပတ်ကြာတစ်ရက်လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်ခန့်ပေးသည့် PQQ သည်အိပ်ချိန်ကြာချိန်နှင့်အိပ်ချိန်နောက်ကျခြင်းတို့ကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။
pyrroloquinoline quinone သည်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကလေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသည်။
အရွယ်ရောက်သူ ၂၉ ယောက်၏လေ့လာမှုတွင် pqq ၏ဖြည့်စွက်ပမာဏသည် LDL ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုဆိုးရွားစေသည်။
Pyrroloquinoline quinone သည် triglycerides အဆင့်များကိုလျှော့ချပေးပြီး mitochondrial function ကိုတိုးပွားစေသည်။ ကြွက်များနှင့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ppq ပေးထားသောပမာဏသည်သူတို့၏ triglyceride အဆင့်ကိုလျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Pqq ဖြည့်စွက်မှုသည်သွေးကြောကျဉ်းခြင်း (လေဖြတ်ခြင်း) ကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ လေ့လာမှုအချို့အရ ppq သည်ဤရောဂါ၏အဓိကအမှတ်အသားဖြစ်သော C-reactive protein နှင့် trimethylamine-N-oxide ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
vi ။ တစ် ဦး ကအလားအလာအသက်ရှည်အေးဂျင့်
Pyrroloquinoline quinone သည်ဗီတာမင်မဟုတ်သောကြီးထွားမှုအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီးသင်၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ oxidative stress ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် mitochondrial function ကိုထောက်ပံ့ခြင်းတို့တွင် pyrroloquinoline quinone သည်လူတစ် ဦး ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ဤယန္တရားများမှရရှိသောအကျိုးတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် PQQ ကိုသင့်အားဆယ်လူလာအိုခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်အသက်ရှည်စေခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်တစ်ခုတွင် pqq ဖြင့်ဖြည့်စွက်ဆေးသည် oxidative stress ကိုလျှော့ချရန်နှင့် roundworms သက်တမ်းကိုတိုးစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
VII ။ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုမှကာကွယ်မှု
PQQ သည်ပရိုတင်းများနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့်ဆဲလ်အတွင်းရှိဓာတ်တိုးခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် pqq ဖြည့်စွက်ဆေးသည် oxidative-related neuron ဆဲလ်သေခြင်းကိုတားဆီးရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် PQQ သည်အထီးကျန်အသည်း mitochondria ဆဲလ်များကိုဓါတ်တိုးစေသောစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ပျက်စီးခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးပြီး superoxide အစွန်းရောက်များကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
streptozotocin- သွေးဆောင် (STZ) ဆီးချိုကြွက်များနှင့်အတူနောက်ထပ်လေ့လာမှု, 20 ရက်အဘို့အ 15 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်မှာပေးအပ် PQQ, XNUMX ရက်များအတွက်ဂလူးကို့စနှင့် lipid peroxidation ထုတ်ကုန်များ၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်လည်းဆီးချို mouse ကို ဦး နှောက်အတွက် antioxidants ၏လှုပ်ရှားမှုများမြင့်တက် ။
အခြား pyrroloquinoline quinone အသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်:
လက်ရှိကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအခြေအနေတွင် COVID 19 ကြောင့်မကောင်းသောသတင်းများသည်အချိန်တိုင်းလာနေသည်။ Pyrroloquinoline quinone coronavirus ရန်ပွဲကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဖြည့်စွက်ဆေးသည်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသကဲ့သို့သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေရန်အိပ်စက်ခြင်းအထောက်အကူကိုလည်းပေးနိုင်သည်။
pyrroloquinoline quinone (pqq) ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
အစားအစာရင်းမြစ်များမှ PQQ ကိုရရှိသောအခါတစ်စုံတစ်ရာသောအစားအစာနှင့်ဓာတ်မတည့်ပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိပါ။
ကြွက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရောဂါ PQQ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကြွက်များပါဝင်သည်ဟုလေ့လာမှုတစ်ခုအရ PQQ သည် ၁၁-၁၂ မီလီဂရမ် / ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိုးပြီးကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ကြွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၂၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသော PQQ သည်ကျောက်ကပ်နှင့်အသည်းတစ်ရှူးများကိုအဆိပ်ဖြစ်စေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူသားများတွင်ဆိုးရွားသည့် pyrroloquinoline quinone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးခြင်းဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိပါ။
သို့သော်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်များတွင်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော pyrroloquinoline quinone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊
pyrroloquinoline quinone (pqq) သည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်အတွက် Federal မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးမှအပြည့်အ ၀ အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးသောကြောင့် pyrroloquinoline quinone သောက်သုံးသောစံသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းအချို့လေ့လာမှုများက pyrroloquinoline quinone သောက်သုံးမှုသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ မီလီဂရမ်မှအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သို့သော် PQQ ဖြည့်စွက်ဆေးများသည် ၂၀ မှ ၄၀ မီလီဂရမ်ထိထိုးသည်။
Pyrroloquinoline quinone သောက်သုံးသော ရည်ရွယ်ထားပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အချို့လေ့လာမှုများကတစ်နေ့လျှင် ၀.၇၅၇ မှ ၀.၃ မီလီဂရမ်မှတစ်ကီလိုဂရမ်နှုန်းသည် mitochondria ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်ခန့်ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
COQ10 နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ, 20 မီလီဂရမ် PQQ နှင့် 200 မီလီဂရမ် COQ10 ဆေးများအကြံပြု, 20 မီလီဂရမ် PQQ နှင့် 300 မီလီဂရမ် COQ10 ကိုအသုံးပြု။ အချို့သောလေ့လာမှုများမဆိုဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအစီရင်ခံတင်ပြမထားဘူး။
ထို့ကြောင့်သင်သည်အနိမ့်ဆေးများမှ စတင်၍ လိုအပ်သည့်အတိုင်းတိုးမြှင့်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာလေ့လာမှုများစွာသည်တစ်နေ့လျှင် ၈၀ မီလီဂရမ်ထက်ကျော်လွန်သောဆေးကိုသောက်ရန်မအကြံပြုပါ။
မည်သည့်အစားအစာများတွင် pyrroloquinoline quinone (pqq) ပါ ၀ င်သနည်း။
များသောအားဖြင့်အလွန်နည်းပါးသော်လည်း Pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုအပင်အစားအစာအများစုတွင်တွေ့ရသည်။ အပင်များသည် PQQ ကိုမြေဆီလွှာနှင့်မြေဆီလွှာနှင့် methylotrophic, rhizobium နှင့် acetobacter ဘက်တီးရီးယားများမှတိုက်ရိုက်ရရှိသည်။
လူ့တစ်သျှူးများတွင် Pqq သည်အစားအစာမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားထုတ်လုပ်မှုမှရရှိသည်။
ဤအစာအာဟာရအရင်းအမြစ်များရှိ pyrroloquinoline quinine ပမာဏသည် ၀.၁၉ မှ ၆၁ng / g အထိကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားသည်။ သို့သော် pqq သည်အောက်ပါအစားအစာများတွင်ပိုမိုပါဝင်သည်။
PQQ ၏အခြားအစားအစာရင်းမြစ်များမှာပန်းဂေါ်ဖီပင်များ၊ မုန်ညင်း၊ fava ပဲ၊ ပန်းသီး၊ ဥ၊ ပေါင်မုန့်၊
အစားအစာအများစုတွင် pqq နိမ့်ကျမှုကြောင့်အစားအစာအချို့ကိုများများစားစားမသောက်ပါက pqq နှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခုန်ကျော်ရန်လုံလောက်သောပမာဏရရှိရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းသောအစားအစာကိုဖြည့်စွက်ရန် pqq ဖြည့်စွက်စာကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
PQQ နှင့် COQ10
mitochondria တိုးမြှင့်သူအဖြစ်မှတ်ယူထားသော coenzyme Q10 (COQ10) သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အစားအစာအများစုတွင်တွေ့ရတတ်သည်။ ၎င်းသည် PQQ နှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော် pyrroloquinoline quinine နှင့် CQ10 သည်အလွန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်သို့မဟုတ် mitochondrial လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်စေရန်ကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများကိုအသုံးပြုသည်။
coenzyme Q10 သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး mitochondria တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးဆဲလ်အသက်ရှူခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အောက်စီဂျင်အသုံးချခြင်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် PQQ သည် mitochondria ဆဲလ်အရေအတွက်တိုးပွားစေပြီး mitochondria ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
pyrroloquinoline quinine နှင့် CQ10 တို့ကိုအတူတကွခေါ်ယူသောအခါ mitochondrial လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အား oxidative stress များမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဆယ်လူလာအချက်ပြလမ်းကြောင်းများမှညှိနှိုင်းခြင်းတို့၌အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
pqq ဖြည့်စွက်အမှုန့်၏မလွှဲမရှောင်အကျိုးကျေးဇူးများအများကြီးရှိပါတယ်နှင့်သင်ကသင်၏အစားအစာချီးမွမ်းရန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ PQQ အမှုန့်ရောင်းရန်အွန်လိုင်းကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည် သို့သော်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရရှိရန်သေချာစေရန် pqq ဖြည့်စွက်စာကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါအကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်အထူးဂရုပြုပါ။
သင် pqq အမြောက်အများအမှုန့်ဝယ်ယူစဉ်းစားခဲ့လျှင်သင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပေးသွင်းထံမှရသေချာပါစေ။
Chowanadisai ဒဗလျူ, Bauerly KA, Tchaparian အီး, Wong ကအေ, Cortopassi GA, Rucker RB (2010) ။ Pyrroloquinoline quinone သည် cAMP တုန့်ပြန်မှုဒြပ်စင် - စည်းနှောင်ထားသောပရိုတိန်းဖော့စဖောလိတ်နှင့် PGC-1αဟူသောစကားရပ်အားဖြင့် mitochondrial biogenesis ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ ဇီဝကမ္မ။ Chem ။ 285: 142-152 ။
Harris က CB1, Chowanadisai W, Mishchuk DO, Satre MA, Slupsky CM, Rucker RB။ (2013) ။ Dietary pyrroloquinoline quinone (PQQ) သည်လူ့ဘာသာရပ်များတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် mitochondrial-metabolism အညွှန်းများကိုပြောင်းလဲသည်။ J ကို Nutr ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ဒီဇင်ဘာ; 24 (12): 2076-84 ။ Doi: 10.1016 / j.jnutbio.2013.07.008 ။
Kumazawa တီ၊ Sato K. ၊ Seno H. , Ishii A. နှင့် Suzuki O. (1995) ။ အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများအတွက် pyrroloquinoline quinone ၏အဆင့်ဆင့်။ J.307: 331-333 ။
Nunome K. , Miyazaki S. , Nakano အမ်, Iguchi-Ariga အက်စ်၊ Ariga အိပ်ချ် (2008) ။ Pyrroloquinoline quinone သည် DJ-1 ၏ oxidative status အပြောင်းအလဲများမှတစ်ဆင့် oxidative စိတ်ဖိစီးမှု - အာရုံခံအာရုံခံသေခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Pharm ။ နွား။ 31: 1321-1326 ။
ရှင်ပေါလု Hwang & Darryn အက်စ် Willoughby (2018) ။ အရိုးကြွက်သား Mitochondrial ဇီဝဖြစ်စဉ်အပေါ် Pyrroloquinoline Quinone ဖြည့်စွက်နောက်ကွယ်မှယန္တရားများ: လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သော Synergistic သက်ရောက်မှု, အမေရိကန်အာဟာရ၏ကောလိပ်၏ဂျာနယ်, 37: 8, 738-748, DOI: 1080 / 07315724.2018.1461146 ။
Stites T၊ မုန်တိုင်းဒီဒီနှင့် Bauerly K တို့စသည်။ (2006) ။ စာသားအပြည့်အစုံ: Pyrroloquinoline quinone သည်ကြွက်များတွင် mitochondrial အရေအတွက်နှင့် function ကို modulates ။ J ကို Nutr။ ဖေဖော်ဝါရီ; 136 (2): 390-6 ။
Zhang L, Liu J, Cheng C, Yuan Y, Yu B, Shen A, Yan M. (2012) ။ စိတ်ထိခိုက် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာအပေါ် pyrroloquinoline quinone ၏ neuroprotective effect ။ J ကို Neurotrauma ။ မတ် ၂၀; 20 (29): 5-851 ။
1.Pyrroloquinoline quinone (pqq) ကဘာလဲ။
3. အဓိကအရေးကြီးသော (PQQ) pyrroloquinoline quinone အကျိုးကျေးဇူးများ
4.Pyrroloquinoline quinone (pqq) ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
PQQ ၏ 5.Dosage
၆။ မည်သည့်အစားအစာများတွင် pyrroloquinoline quinone (pqq) ပါ ၀ င်သနည်း။
7.PQQ နှင့် COQ10
8. ဝယ်ယူ PQQ ဖြည့်စွက်